बजारमा प्लास्टिकको नक्कली अण्डाको बिगबिगीः यसरी चिन्नुहाेस् प्लास्टिक को अन्डा (नक्कली तथा सक्कली अण्डा )(भिडियाे सहित) – Nepali Update
बजारमा प्लास्टिकको नक्कली अण्डाको बिगबिगीः यसरी चिन्नुहाेस् प्लास्टिक को अन्डा (नक्कली तथा सक्कली अण्डा )(भिडियाे सहित)
काठमाडौं । अण्डा स्वास्थ्यको लागि निकै पोषिलो मानिन्छ । तर, अब बजारमा अण्डा किन्न जानुअघि धेरै सोच्नुपर्ने भएको छ । यतिबेला भारतीय बजारमा नक्कली अण्डाको बिगबिगी देखिएको छ । नक्कली अण्डा खाएर मानिसहरु बिरामी पर्न थालेका छन् । भारतसँग खुला सीमा भएका कारण नक्कली अण्डाहरु नेपाली बजारमा पनि नभित्रिएला भन्न सकिन्न । यसै कारण हामीले सक्कली र नक्कली अण्डा चिनिराख्नु आवश्यक छ । झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले हेरेकै भरमा कुन सक्कली अण्डा र कुन नक्कली भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्छ । अण्डा नक्कली हो भनेर यी तरिकाबाट चिन्न सकिन्छ:
के हो नक्कली अण्डा ? कसरी बनाइन्छ ?
अण्डाको भित्रको पहेंलो भाग तथा बाहिरको सेतो भाग तयार गर्न पनि यही मिश्रणको प्रयोग गरिन्छ । पहेंलो भाग बनाउन मिश्रणमा पहेलो रंगको प्रयोग बढी गरिन्छ । अण्डाको बोक्रा बनाउन भने क्याल्सियम क्लोराइडको प्रयोग गरिन्छ । साभार श्राेतः बिभिन्न अनलाइन
किशोर चाम्लिङ्गको नेपालकी छोरी गीत सार्वजनिक (म्युजिक…